कुकुरलाई दिइयो १५ रोपनी जग्गा अंश ! « गोर्खा आवाज
कुकुरलाई दिइयो १५ रोपनी जग्गा अंश !
१७ पुस २०७७, शुक्रबार ००:००
एजेन्सी । आफ्ना छोराछोरीको नाममा बाउआमाले पैत्रिक सम्पत्ति नामसारी गरिदिनु त स्वभाविकै हो । तर छिमेकी मुलुक भारतको मध्यप्रदेश छिन्दवाडामा चाहिँ एकजना किसानले घरमा पालेको कुकुरको नाममा आफ्नो १५ रोपनी जग्गा नामसारी गरिदिएका छन् ।